Ibhlog -Singapore umbane wokuhambisa umbane pte ltd
Kuxhomekeke kwinjongo yayo, kukho iintlobo ezahlukeneyo zegiya ezenziweyo ngokobungakanani, iisefu, izinto, njalo njalo, zonke ziyilelwe ziyafumaneka kwintengiso. Ngokwamalungiselelo e-asi okanye i-PTO shaft, esetyenziselwa ukwahlula uhlobo ngalunye lwezixhobo, kukho iindlela ezahlukeneyo zendlela eyaziwayo yokuzihlela. Iindidi ze-3 zokucwangciswa kwe-shaft zikhona, oko kukuthi, i-shafts efanayo, i-axis engalinganiyo, kunye ne-non-intersecting okanye i-shafts shafts. Okokuqala, kwinqanaba elifanayo lomgangatho, izixhobo ze-shaft ezifanayo zihlobo lweegesi ezidibeneyo. Ukuhambisa amandla okuhamba ngokujikeleza phakathi kweeshafti ezifanayo, zisebenza njenge […]
Ukusuka kumthombo wamandla ojikelezayo usiya kwenye isixhobo usebenzisa umlinganiso wegiye, ibhokisi yegiye inikezela nge-torque kunye nokuguqulwa kwesantya. Ingasetyenziswa kwiimeko ezahlukeneyo ezinje ngeebhayisikile ezinyovwayo, oomatshini abazinzileyo, nakweyiphi na indawo ejikelezayo kunye nesantya ekufuneka ilungisiwe. Kodwa, ezimotweni, eyona ndawo ixhaphakileyo kulapho iivili eziqhubayo, ibhokisi yemiyalezo ene-taper bush iguqula imveliso yeenjini zangaphakathi zomlilo. Azinakusetyenziswa kwimisebenzi emininzi njengokumisa okanye ukuqala njengoko ezi njini zifuna ukuqhutywa ngesantya esiphezulu. Kucacile ukuba kufuneka zisetyenziswe ikakhulu kwi […]
Yazi malunga neTsala lokuDonsa
Ukuhambisa kubandakanya ukulandelelana okutsalwa ngombhobho. Iiyunithi eziphethe iitoni ezininzi ngeyure zihlala zakhiwa kusetyenziswa iziseko zokusebenzela ezisisiseko. Umsebenzi ubonakalisiwe ngesimbiwa esiqhelekileyo kunye neenkozo eziqhelekileyo, kusetyenziswa ikhonkco elinama-25-mm amakhonkco kwimibhobho enobubanzi be-25, 38, okanye i-50 mm. Ii-angles ziqala ukusuka kwindawo ethe tyaba ukuya kwi-60 ° kunye nesantya setyathanga ukusuka kwi-0.2 ukuya kwi-4 m / s. Ukubeka-ukubeka okwahlukeneyo ngokulandelelana ngesantya setyathanga ukusuka ekurhuqeni umthengisi wetyathanga ukuze isixhobo sibe nakho ukufana nesondli eqinileyo. Unxibelelwano olunikezelweyo ukwenza ukuba iiparameter zoyilo eziyimfuneko zokuhambisa ziqikelelwe […]
Ukukhetha iKhonkco eliNokuthenjwa lokuSebenzisa kwiSicelo sakho
Ityathanga lokuhambisa liqeshwe kwiplanethi yonke ngexesha kukhetho olubanzi lwezicelo ezahluka-hlukeneyo ukusuka kumbutho wokuchela ngaphakathi kumzi mveliso wezolimo ukuhambisa izithuthi kumgca wendibano kumzi mveliso weemoto. Ukuba kukho into efuna ukuhanjiswa ukusuka kwindawo engu-A ukuya kwindawo engu-B ngokuqhubekayo, nokuba iyaqokelelwa, ipeyintiwe, ihlanjiwe, ihlolwe, okanye igcinwe ukuze isetyenziselwe ixesha elizayo, amathuba okuba intambo yokuhambisa ilungile kwisibindi senkqubo. Zine iindlela zokugweba ezifunekayo ekusebenzeni okuphezulu kwesixokelelwano sokuhambisa. Ngawona mandla aphezulu, amandla okunxiba, ukuxhathisa ukudinwa, kunye noxinzelelo lokuchasana. Nangona amandla okugqibela endlela […]
Chwetheza “MD” IINQWELO ZOKUSETYENZISA IIBHAKATHI zelevifti zenjongo esemgangathweni
Uhlobo lwesakhiwo sombhoxo "MD" Amabhakethi akhethwa kakhulu kwizinyusi jikelele. Ukugubungela ukhetho olubanzi lobungakanani ukusuka kwii-intshi ezi-4 ukuya kwezingama-20 ubude, zisetyenziselwa izinto ezinobungakanani obuphakathi kunye namalahle, isamente, umgubo, iinkozo, umbona weendlebe, njalo njalo. Baqeshwe kakhulu kwizinto ezinobunzima ezinobunzima ngolu hlobo lwesanti, igrabile kunye nelitye. Imilebe eyomeleleyo engaphambili inika iMfashini "MD" Iibhakethi ixesha elide lokunxiba. Ubungqingqwa obudibeneyo beendonga kunye nokuqiniswa kwekona eliqinileyo kubenza bomelele kuneebhakethi zentsimbi ezinobungakanani obulinganayo.
IiBhakethi ze-Elevator zivelisiwe kwiiYilo? ¡ÃMD? À À Umsebenzi woSetyenziso kunye? ÀStyle? Ã DAMD? À À IBHAKI LOKUNYULA LOKWENZA? ¡ÃMD? Zigubungela ukhetho olubanzi lobungakanani ukusuka kwii-intshi ezine ukuya kwezingamashumi amabini ubude kwaye ziqeshelwe ubungakanani kunye nobukhulu obuphakathi kwezinto ezinje ngamalahle, isamente, umgubo, iinkozo kunye nombona weendlebe. Zingasetyenziselwa ngokubanzi ngokubanzi izinto ezinqabileyo ezinje ngesanti, igrabile kunye nelitye. Imilebe eyomeleleyo engaphambili inika amabhakethi umda wokumba omde. Iindonga zebhakethi zinokulingana […]
ixesha elide i-700 Class Pintle Chain ye-fers amandla amakhulu kumanqatha amancinci. Ngokwenene kufanelekile ukusetyenziswa kwezityalo zelindle ngaxeshanye nokunye ukuhambisa nokuphakamisa ukusetyenziswa. Iiparali ezisecaleni ziye zaphosa izikhonkwane kwi-tT-head izikhonkwane, ngaphandle kokuphelisa ujikelezo lwepini kunye nokuthintela ukungena kokungcola kunye nokungena kwimingxunya yeepini. Isakhiwo esivaliweyo sokuthwala sinceda ukunceda ukugcina ikhonkco likhuselwe kwi-elonga-tion ye-esonga ngenxa yokufakwa okungafunekiyo. Uphuculo lwentambo ekhutshiweyo luyacetyiswa kwisicelo sokuhambisa amanzi amdaka, kodwa nokuba kungakhiwa ngokhutshu okanye ukurhangqwa kuyafumaneka xa uceliwe. Iibhedi ezingenazintsimbi zinokubonelelwa […]
I-400 Class Pintle Chain ihlala ikhaphukhaphu, ityhefu enexabiso eliphakathi ekwaziyo ukurhangqa imithwalo rhoqo ngesantya esicothayo okanye esiphakathi. Ngokwenyani iphoswe ngokulinganayo ibhalansi, ukomelela kunye neenkonzo ezinde, ezinesidima, kwaye inikezelwa kulwakhiwo oluqokelelweyo okanye olunothile. Intloko yepini nganye ayitshixwanga? Isakhiwo esivaliweyo sokuthwala senza i-400 Class Pin-tle Chain isebenze ekuhambiseni izinto ezinoburharha kunye nezinto ezirhabaxa. Yenziwe kwiPropal, ene-ten-sile yamandla ahluka ukusuka kwisixhenxe, 800 ukuya kuma-28,600 eepawundi, i-400 Class Pintle Chain yi […]
IINKONZO ZOKUTSHINTSHA zifumaneka ngeendlela ezimbini: “H” Class Chain Chain kunye ne-Combination Transfer Chain. “H” Class Transfer Chain in-cludes abantu banenombolo H 78A, H 78B, H 130, H 131, kunye no-H 138. Zonke ii- “H” Class Transfer Chain zifumaneka kuphela kulwakhiwo lwemigangatho. Ikhonkco yokuDluliswa kweCandelo "H" enenombolo H 78A, H 130, kunye no-H 131 yenziwe ngophahla oluphezulu. Ikhonkco elineenombolo H 138 kunye no-H 78B linophahla. Ngokwenyani ilapha ngaphandle kuphela kulwakhiwo olu-riveted kunye nophahla olushushu.
LWETYATHANGA MILL LWETYATHANGA
"H" Class Mill Chain ngokuqinisekileyo yinto yamandla amakhulu, esebenzisekayo ekuqaleni isayinelwe ukuqhuba okunzima kunye nokudlulisa imisebenzi yokuhambisa kumatshini okusila aqatshelweyo nakwimakethi yephepha kunye nomgubo. U "H" Class Chain uziqinisekisile ngokungenakubalwa kokunye ukusetyenziswa kwezemizi-mveliso kwakhona, ngakumbi umsebenzi ophakathi kwiindawo ezinoburharha indawo enesithsaba, ikhonkco elirhabaxa liphinde lacinywa. yomeleze kwaye iqine ii-hyperlink xa iqhutywa emikhombeni okanye ngaphezulu kwe-oors kunye ne-runways. […]
Umxokelelwane womxube usetyenziswa kakhulu ngelixa isamente, iphepha kunye nomgubo, ukumba amatye, kunye nemigodi yokuphakamisa kunye nokuhambisa uluhlu olubanzi lwezixhobo ezirhabaxa kunye nezingaxinanisi. Ukongeza, iyafumaneka kwimisebenzi emininzi yokuhanjiswa kwendibano. Akucetyiswa ukuba kudityaniswe ikhonkco, kwaye ukwakhiwa kweMixokelelwano yokudibanisa kuhlala kukhitshwe okanye kuhluthwe. I-Cottered ihlala ithathwa njengesiqhelo. Izikhonkwane zinemimandla ekupheleni kwayo, ethi itshixe kwiibhola ezisecaleni ezifanelekileyo, kuthintelwe ukubethelwa kwepini kulo lonke ixesha lokusebenza kwetyathanga. Yonke imingxunya yephini icocekile ngenxa yemigca egudileyo ethweleyo kwaye ke iyalinganiselwa ukucoca ipini efanelekileyo. Intengiso […]
LWETYATHANGA LOKUQHUBEKA LOKUQHUBEKA LOKUQHUBA LOKUQHUBA IBHODI YOKUQHUBA
I-Rivetless Drop Forged Chain icingelwa ukuba inokuthi ithathelwe ingqalelo njengelinye lamatyathanga awomeleleyo awenziweyo, kwaye ibonile ukusetyenziswa ngokubanzi kumashishini amaninzi. Isizathu sokuba iimveliso zingasoloko zipakisha kumgaqo ovulekileyo, iRivetless Drop Forged Chain isetyenziselwa kakhulu ukuhambisa? Uyilo lwayo luvumela ukusebenza ngokuthe nkqo nangokuthe nkqo kwiindlela ezingaqhelekanga, kuyivelisa ngakumbi ikwazi ukuqhuba inkonzo yokuhambisa itroli. Isitayile esiQhelekileyo sinikwa kuphela izikhonkwane zentloko ye-T ezilawulwa ngobushushu. Ezi […]
Ukuhanjiswa kwamandla rhoqo (iSinodrive) Pte Ltd.
Sinikezela ngesinciphisi, imijelo, umatshini kunye nomxokelelwane wokuhambisa, iibhanti, iipleyile, iigiye, iiracks, iibhokisi zegiya, iimoto, i-PTO Shafts, i-taper lock Bushing, ii-Pumps ezincamathelayo, izikrufu zomoya kunye nezinye iimveliso. Nceda uqhagamshelane nathi ukufumana iinkcukacha.
Ukuchaneka kokuPhezulu komgangatho ophezulu
Ukujonga ngokungaphaya kweSleeve
I-FLAMM kunye ne-FLAMMFR ezahlukeneyo, idatha ye-FA eyahlukeneyo yokuSebenza
Uhlobo lwe-FLA, uhlobo lweDatha yokuSebenza kweDatha
Uhlobo lwe-FLEF, i-FRR KindCouplings Ulwazi loLwazi
Uhlobo lwe-FSLX, Uhlobo lwe-FSPCR yeDatha yokuSebenza ngokubanzi
Uhlobo lweMFM Mill lweMoto, uLwazi lweFSL yoLwazi ngokuSebenza
Ifom ye-FHDFS, isitayile se-FMM Ulwazi ngokubanzi
Ifom ye-FHD, isitayile se-FHDFR seFlex-Rigid Coupling
Ifom ye-FFR, i-FFS yeFlick Shaft Coupling
Nylon Sleeve Series yemiqadi yokuhlanganisa emininzi, F Uhlobo Flex-Flex yemiqadi yokuhlanganisa
I-CFS, i-CSPCR yeDatha yokuSebenza ngokuFanelekileyo
C kunye neCFR yoLwazi lweSitayile sokuSebenza
Inkqubo yoKhetho lweNdlela yokuDibanisa
Yenza ingxubevange Steel Series yemiqadi yokuhlanganisa
I-Sier-Bath Flanged Sleeve Series Coupling
ISier-Bath Nylon ukudibanisa
I-Sier-Bath sleeve eqhubekayo kunye ne-Flanged Sleeve Coupling
Inkqubo yoLungiso lwe-DIR, DIRA, DILR, kunye ne-DILRA Coupling Disc
I-DI-6, i-DI-8 yeSitayile sokuDibanisa iZiko lokuDibanisa iMizi-mveliso
I-SXC-6, i-SXCS-6, i-SXCST-6Uhlobo oluValiweyo oluDibeneyo lokuDibanisa iMizi-mveliso
I-SU-6, i-SX-6, i-SX-8 eyahlukeneyo yokuDibanisa iMizi-mveliso
Ulwazi olucetywayo kunye nezibakala ezinqwenelekayo ukuChaza ukuDibanisa iDiski
Amanyathelo ekukhetheni i Coupling Coupling
JDLB Yenza ukhetho
I-JDLB Series iiyunithi ezinkulu zeentshulube ezichanekileyo
Ukufakwa kweBelt kunye nokuNciphisa isicelo
Cwangcisa ibhokisi ye-SMR
Imiyalelo yoku-odola ibhokisi ye-SMR
Uluhlu lwebhokisi yeeNgingqi zeSMR
Ukucaciswa kweRMR yokuCutha
I-DC MOTOR PUMP IQELA
IBUYEKEZA NGEEYUNITHI zamandla ombane
IINDAWO ZAMANDLA ZOKUPHAKAMISA ITHEYIBHILE
IIYUNITHI ZAMANDLA KWINQANABA LOMSEBENZI
ITRAKU YEPALLET Amandla oMbane IYUNITHI
Izixhobo zokuLawula amandla UNIT
UKULIMA NGOKUQHAQHA ICANDELO lamandla ombane
IYUNITHI YOLAWULO LWEZIMBANE
IIYUNITHI zamandla zokuphakanyiswa kabini
Ukhetho lweCandelo lokuhambisa
Uluhlu lweLeaf-Iinkcukacha ngokubanzi kunye nokuHanjiswa
Ukugcinwa Kwasimahla kweRoller Chain - Ulwazi oluqhelekileyo
Umtya weRoller yentsimbi engenasici - Ulwazi ngokubanzi
Umhlwa kunye Ubushushu mqengqeleki Resistant Resistant